रोचक Archives - Recent Nepal News
के तपाईं आफन्तसँगको भेटघाटमा चुम्बन, अङ्कमाल वा हात मिलाउँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने झुक्किएर पनि त्यसप्रकारको क्रियाकलाप गर्नबाट टाढै रहनुहोस् । तपाईं वा तपाईंका आफन्तजनलाई पनि कोभिड–१९ अर्थात् नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुनसक्छ । चीनबाट शुरु भएको उक्त भाइरस नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अपनाएका छन् तर सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्युलाई रोक्न सकिएको छैन । अहिले चीनमा सङ्क्रमणको दर ...
राजेन्द्र आचार्य मेलम्ची : बढ्दो मात्रा सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न वागमती प्रदेशमा पहिलो पटक सडकमै चालक र सहचालक ड्रग युरिन टेस्ट सुरु गरिएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण गर्ने तथा सावारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने अभियान अन्र्तगत वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाको सहकार्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको आयोजनामा मेलम्चीबाट सडकमै चालक र सहचालक ड्रग युरिन टेस्ट सुरु गरिएको हो । लागु ...
एजेन्सी – बाटोमा शौच गरेको भन्दै दुई दलित बालबालिकाको कुटीकुटी हत्या गरिएको छ । भारतको मध्यप्रदेशको शिवपुरी जिल्लाको सिरसौद थाना क्षेत्रको भावखेडी गाउँमा खुल्ला शौच गरिरहेका दुई दलित बालबालिकाको कुटीकुटी हत्या गरेका हुन् । बुधबार बिहान वाल्मिकी समाजका दुई बच्चा १२ वर्षकी रोशनी र १० वर्षका अविनाश पंचात भवन अगाडिको सडकमा शौच गरिरहेका थिए । पुलिसका अनुसार हाकिमले दुई बच्चालाई सडकमा शौच गरेर सडक फो...
बोत्तलमा लेखिएको एउटा सन्देशले बचायो परिवारका सबै सदस्यको ज्यान,के लेखिएको थियो ?
एजेन्सी - अमेरिकामा एउटा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको ज्यान बोत्तलमा लेखिएको एउटा ‘शब्द’का कारण जोगिएको छ । तीब्र बहाव भएको एउटा झरनामा फसेको परिवार बोत्तलमा लेखिएको सन्देशका कारण जोगिएको हो । झरनामा फसेका परिवारका सदस्यहरुले बोत्तलमा एउटा शब्द लेखेर फोलेका थिए । सन्देश लेखिएको बोत्तल झरनाको तल (नदी)मा तैरिरहेको फेला पर्‍यो । बोत्तल फेला पार्ने व्यक्तिको मद्दतबाट सम्पूर्ण परिवारको उद्दार भयो । कर्...
चर्को आवाजमा बासेर होहल्ला गरेको भन्दै भाले विरुद्ध मुद्धा,समर्थनमा हजारौँ उर्लिए
एजेन्सी – चर्को आवाजमा बासेर होहल्ला गरेको भन्दै भाले विरुद्ध एक अदालतमा मुद्धा परेको छ । भाले धनीले यसमा आपत्ति जनाउँदै अर्को अदालतमा अपिल दर्ता गराएका थिए। त्यसको फैसला आज हुँदैछ । फ्रान्सको एक अदालतमा मौरिस नामक भालेविरुद्ध धेरै बासेर होहल्ला गरेको भन्दै स्थानीय एक दम्पतीले रोचेफर्टस्थित एक अदालतमा मुद्धा हालेका थिए। अदालतले आफ्नो पहिलो फैसलामा भाले धनीलाई चार हजार युरो (करिब पाँच लाख ने...
सुनको हार लुटेर भाग्न खोजेपछि यसरी खाए पिटाई… (भिडियोसहित)
काठमाडौ - मोटरसाईकलमा सवार एक व्यक्तिले सुनको हार लुटेर भाग्न खोजेपछि नराम्रोसँग पिटिई खाएका छन् । रिक्साबाट बाहिर ओर्लिएपछि बाटो काट्न लाग्दा बाइकमा दुई पुरुषहरु महिलाको सामु आएर हार थुतेर भाग्न खोज्दा खोजेपछि पिटाई खाएका हुन् । मोटरसाइकलबाट महिलाले झारिसकेपछि अरु पुरुषहरुले लुटेरालाई कुटेका थिए । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताहरुले साहसी महिलाभन्दै यो भिडियो आफूले बाँडिरहेका छन् । घटना हो भारतक...
एजेन्सी - एउटा मानिसले कतिवटा सम्म विवाह गर्न सक्छ ? हामिले अनुमान लगाउने एक दुर्व वा तीन सम्म हो । तर एक जना ब्यक्तिले आफ्नो जिवनमा ५८ वटा श्रीमती विवाह गरे । तर पनि उनको बैवाहिक जीवन त्यस्तो असहज भएन । भारतका एक व्यक्तिले ५८ वटी महिलासँग बिहे गरेको भएपनि उनको जीवन असहज भने भएन । बागुन सुम्ब्रुइ नाम गरेका ब्यक्ति जो राजनीतिज्ञ पनि हुन् । उनी पूर्वमन्त्री तथा पूर्व सांसद्म भइसकेका ब्यक्ति हुन् । उ...
काठमाडौं - सुँगुरको वीर्य तस्करी । सुन्दा नै अप्यारिलो। तर अस्ट्रेलियामा केहीले यस्तै गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यहाँको पश्चिमी राज्यका व्यवसायीले सुँगुरको वीर्य तस्करी गरेको आरोपमा काराबासकै सजाय पाएका छन्। अदालतले ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। स्थानीय जीडी पोर्क कम्पनीलाई ५ लाख अस्ट्रेलियन डलर जरिवानासमेत अदालतले तोकेको छ । अस्ट्रेलियामा सुँगुरको वीर्य तस्...